သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: T for Theingi....
T for Theingi....
T for ...Theingi
1. What is your name : Theingi
2. A four Letter Word : True
3. A boy's Name : Thura
4. A girl's Name : Thuzar
5. An occupation : Ticket conductor
7. Something you'll wear : Trousers
8. A food : Tofu
9. Something found in the bathroom : Taps
10. A place : Tibet
11. A reason for being late : Tarrying
12. Something you'd shout : That's life!
13. A movie title : Titanic
14. Something you drink : Tea with honey
16. An animal : Tapir
17. A street name : Thisar Street (Yankin Tsp, Yangon,Myanmar)
18. A type of car : Tesla
19. The title ofasong : Take me home, country road by John Denver
20. A verb : Throw away...
မနော် FB မှာ tag သောကြောင့် ဘလော့ဂ်မှာပါ တင်ဖြစ်သောပို့စ်ပေါ့ ။
ကိုအောင်သာငယ့်ဆီမှာ ဖတ်မိတဲ့ Rule ကို ပြန်တင်ထားတာပါ။
လွတ်လောက်တယ် ထင်ပါရဲ့။ T for ... ကို ဖတ်ဖြစ်တာ သက်ဝေ ပို့စ်တခုပဲမို့လေ... :)
Posted by tg.nwai at 5:40:00 AM
သဘောကျတယ်။ လက်ဖက်ရည်ထဲ ပျားရည်လေးထည့် သောက်ပြီး ထပ်ဖတ်လိုက်အုံးမယ်။
I like Teal color too but I can't put M for ... :(
ဟုတ်ပ သိဂီ င်္ စင်စင်ပြောသလို မြန်မာလိုလေးလဲ လုပ်ပါဦးလို့ အပူကပ်ခဲ့တယ်...